ကရင်မှာတိုက်နေတဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးဟာ ဘယ်သူလဲ? – Myanmar Media
ကရင်မှာတိုက်နေတဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးဟာ ဘယ်သူလဲ?
ကရင်မှာ တိုက်နေတဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးဟာ ဘယ်သူလဲ?
ယခုလေးကေ့ကော်ကို တိုက်တာကို အနီးကပ် ကွပ်ကဲတာက တနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ ဘုတ်ပြင်းမှာထိုင်ထားတဲ့ အမှတ် (၁၃) စစ်ဆင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်က ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇေယျဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အထက်က တိုင်းမှူးက ကမ်းရိုးတန်းတိုင်း တိုင်းမှူးက ဗိုလ်ချုပ်စောသန်းလှိုင်ပါ။ သူ့အထက်က စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးကတော့ DSA ၂၆ ဆင်း (ကြည်း ၁၈၈၈၆) ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးပါ။ သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာရအောင်။
မအလလက်ရုံး မိုးမြင့်ထွန်းထက် ကြီးသူပေါ့။ သူဟာ ၂၀၁၂ အထိ တပ်မ (၃၃) တပ်မမှူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စိုးဖြစ်လာပါတယ်။ သူရာထူးရပြီး မအလတပ်ချုပ်ဖြစ်လာချိန်မှာ သူက မိုင်းလားနဲ့ ဝ ကိုခေါ်ပြီး လက်နက်ချဖို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ခေါ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
မပြောင်းလဲရင် အတိုက်ခံရမယ်လို့ သတိပေးစကားပြောတဲ့အထိပါ။ ၂၀၁၄ အစပိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ အရှေ့မြောက်တိုင်းမှူးဖြစ်ချိန်မှာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဘိန်းကုန်သည်တွေထံက အောက်လမ်းဝင်ငွေရခဲ့ပြီး ချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်။
ထိုငွေနဲ့ ရန်ကုန်က တေးနုယဉ်လမ်းထဲမှာ မြေကွက်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့သားက ကားအသစ်တွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကံကြမ္မာဟာ ၂၀၁၅ မှာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ (၉) ရက်မှာ ကိုးကန့်က ဝင်တိုက်ခဲ့လို့ မအလတပ်တွေ ပိတ်မိပြီး အသေအပျောက်များခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ မှာ ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင်က ဝင်တိုက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လေယဉ်နဲ့ဗုံးကြဲရာမှာလဲ တရုတ်ပြည်ကို ကျခဲ့လို့ တရုတ်က ကြေညာချက်ထုတ် ရာဇသံပေးပါတယ်။ တရုတ်တပ်တွေ နယ်စပ်မှာ စုလာခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲက ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်ကနေ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပြီး မအလတပ်က ၁၂၅ ယောက်သေပြီး ၃၅၆ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်လို့ မြဝတီက ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
တကယ်သေတာက အဆိုပါစာရင်းထက်များပါတယ်။ နောက် ဗုံးသွားကြံချိန်မှာ ဟိုက FN6နဲ့ မြေပြင်ကနေပစ်လို့ နမ့်စန်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ A5 လေယဉ်ထိသွားလို့ လေတပ်က ဗိုလ်မှူးသူရဇေယျာထွန်း မီးလောင်တဲ့လေယဉ်နဲ့ ပြေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
ထိုအချိန်က မအလတပ် အသေအပျောက်များတာကို မအလက တရုတ်နိုင်ငံက ကိုးကန့် MNDAA ကို ကူညီလို့ဆိုတာနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ဘရွှေဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေက မကောင်းလို့ဆိုပြီး အပြစ်ပုံချခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တပ်ထုံးစံအတိုင်း ယခုလိုအတိုက်ခံရတာ အသေအပျောက်များတာဟာ တိုင်းမှူးမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးကို မင်နီတားပြီး အရပ်ဖက်ကို ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီးအနေနဲ့ ၂၀၁၅ ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်မှာ ပြောင်းပြီးခန့်လိုက်ပါတယ်။
လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုလဲ တရုတ်ရာဇသံကြောင့် သံတမန်ရေး မထိခိုက်အောင် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုအရ မအလက ဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးဟာ စစ်တိုက်တော်ခဲ့တာမဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်က ကိုးကန့်ကို ပြန်ထိန်းနိုင်ခဲ့တာက ပြည်တွင်းမှာ ငြိမ်နေလို့ပါ။
မန္တလေးကနေ လားရှိုး၊ လားရှိုးကနေ စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာအထိ ဘယ်သူကမှ ကြးဖြတ်မတိုက်ခဲ့ပါ။ ဒါတောင်အတော်တိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုသူ့ကို ဘာလို့ တပ်ထဲကို မင်နီနဲ့ ပြန်ခေါ်ခဲ့လဲ?
သူကဦးကိုနီလူသတ်မှုကို ဦးဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ မအလရဲ့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူစုံစမ်းရာမှာ မအလရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ မိုင်းဖြတ်လွှတ်တော်အမတ်လင်းဇော်ထွန်းက အဓိကပါဝင်နေတာ သွားတွေ့ပါတယ်။ လင်းဇော်ထွန်းကို သူကိုယ်တိုင်စစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ အခန်းထဲမှာ ရှိမနေခဲ့ပါ။
လင်းဇော်ထွန်းက တပ်ချုပ်မိန်းမ ကြူကြူလှက ဦးကိုနီကြောင့် DASSK နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဖြစ်တာမိုလို့ သုတ်သင်ရှင်းလင်းဖို့ပြောကြောင်း ဒါ့ကြောင့်သူလုပ်ရကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အောင်စိုးဟာ မအလနဲ့တွေ့ပြီး တိုက်ရိုက်သတင်းပို့ပါတယ်။ သူ့ဝန်ကြီးကို မပြောခဲ့ပါ။
မအလက လင်းဇော်ထွန်းကို လွှတ်ထားဖို့ပြောပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံဖို့ တိုင်ပင်ရာမှာ အောင်ဝင်းခိုင်၊ လင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇေယာဖြိုးတို့ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် လင်းဇော်ထွန်းကို ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် အောင်စိုးဟာ မအလကို နိုင်တဲ့အကွက်ရသွားခဲ့ပါတယ်
မအလဟာ အောင်စိုးကိုအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာဆက်ထားရင် သူ့ကိစ္စဖော်မှာစိုးလို့ တပ်ထဲကို ရာထူးတိုးပြန်ခေါ်ပြီး ယခုနောက်ဆုံး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နဲ့ စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ အောင်စိုးသား လာဒ်စားထားတဲ့ကားတွေနဲ့ လိုင်းပေါ်တက်လာခဲ့ပေမယ့်လဲ စုံစမ်းတာမလုပ်ဘဲ ကျော်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ရရင် အောင်စိုးဟာ ကိုးကန့်စစ်ပွဲမှာ စစ်ရှုံးခဲ့သူပါ။ သူတိုင်းမှူးလက်ထက်မှာ အသေများခဲ့လို့ မင်နီနဲ့ ရာထူးချခံထားရသူပါ။ ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှုမှာ တပ်ချုပ်နဲ့သူ့မိန်းမက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိကတဆင့် ပါဝင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကို ဖုံးပေးထားလို့ ရာထူးတက်ခဲ့သူပါ။
သူက လေယဉ်နဲ့ဗုံးကြဲတာ အမြောက်နဲ့ပစ်တာသာ လုပ်တတ်သူပါ။ ဒါ့ကြောင့်မြေပြင်မှာ သူ့ရဲ့ပြည်မက ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကို ဖျက်နိုင်ရင် စာရေးသူတို့ နိုင်မှာပါလို့ ပြောပါရစေ။
” KNU ခေါင်းဆောင်များ ပြတ်သားပြီ “